C6H12O6 (fructose) => ? | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
C6H12O6 =? | Isu dheellitirka Kiimikada
Natiijooyinka 27 helay
Muujinta isleeg ka 1 ilaa 5 Bogga 1 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
C6H12O6 → 2H2 + 2CO2 + CH3CH2CH2COOH
fructose hydrogen carbon dioxide
(rnn) (kh) (kh) (lng)
1 2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C6H12O6 H 2H2 + 2CO2 + CH3CH2CH2COOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee C6H12O6 (fructose)?
Xalka: khamiirka Xaaladda Kale: khafiifsan butiric
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo CO2 (kaarbon dioxide) iyo CH3CH2CH2COOH ()?
Khamiirinta Glu butiric
Dhacdada ka dib C6H12O6 (fructose)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C6H12O6 H 2H2 + 2CO2 + CH3CH2CH2COOH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C6H12O6 (fructose)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C6H12O6 (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H12O6 (fructose) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada CO2 (kaarbon dioxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3CH2CH2COOH ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CH3CH2CH2COOH (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CH2CH2COOH () alaab ahaan?
2C6H12O6 + Cu (OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu
fructose naxaas (ii) hydroxide biyaha
(rnn) (dd) (lng) (rnn)
(xoog leh) (xan) (xoog leh) (xanh lam)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2C6H12O6 + Cu (OH)2 H 2H2O + (C6H11O6)2Cu
Waa maxay xaaladda falcelinta ee C6H12O6 (fructose) waxay la falgashaa Cu (OH) 2 (naxaas (ii) hydroxide)?
Xaaladda Kale: caadi t0
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo (C6H11O6) 2Cu ()?
Gulukoosku waxay la falgalaan Cu (OH) 2 heerkulka caadiga ah si ay u soo saaraan kakooban-gulukoos
Dhacdada ka dib C6H12O6 (fructose) waxay la falgashaa Cu (OH) 2 (copper(ii) hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2C6H12O6 + Cu (OH)2 H 2H2O + (C6H11O6)2Cu
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Cu(OH)2 (copper(ii) hydroxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cu(OH)2 (copper(ii) hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu(OH)2 (copper(ii) hydroxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (copper(ii) hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta (C6H11O6)2Cu ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (C6H11O6)2Cu (copper(ii) hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (C6H11O6) 2Cu () alaab ahaan?
fructose (c2h5) 2nh diethylamine carbon dioxide
(rnn) (lng) (kh)
1 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Heerkulka: 30 - 35 ° C Xalka: enzyme
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) iyo CO2 (carbon dioxide)?
Marka enzyme-ka kalluumeysato, gulukooska waxaa loo khamiiriyaa ethanol iyo kaarboon laba ogsaydh
Fal-celinta halsano waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro aalkolo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C2H5OH (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) badeecad ahaan?
Ag2O + C6H12O6 → 2 Ag + C6H12O7
oxide qalin fructose lacag D-Gluconic acid; Gluconic acid
(rnn) (dd) (rnn) (dd)
(ka) (xoog leh) (Trang BAC)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ag2O + C6H12O6 → 2Ag + C6H12O7
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Ag2O (silver oxide) ee ka falcelisa C6H12O6 (fructose)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ag (silver) iyo C6H12O7 (D-Gluconic acid; Gluconic acid)?
Ku shub dhawr dhibcood oo ah amooniyam lacag qalinka tijaabada xalka ammonia, si tartiib ah u rux, ku dar xalka gulukooska, ka dibna ku rid tubada tijaabada dhalo biyo kulul ah
Dhacdada ka dib Ag2O (silver oxide) waxay la falgashaa C6H12O6 (fructose)
Falcelinta waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo muraayadda sidaa darteed waxaa loogu yeeraa falcelinta daboolka muraayadda. Dareen-celintaas, gulukooska waxaa lagu oksiisiyey astaamaha loo yaqaan gluconic acid.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ag2O + C6H12O6 → 2Ag + C6H12O7
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Ag2O (silver oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ag2O (silver oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag2O (silver oxide) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ag (lacag)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ag (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag (silver) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta C6H12O7 (D-Gluconic acid; Gluconic acid)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C6H12O7 (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H12O7 (D-Gluconic acid; Gluconic acid) badeecad ahaan?
C6H12O6 → 2CH3CH (OH) COOH
1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C6H12O6 → 2CH3CH (OH) COOH
Xalka: khamiirka Xaaladda Kale: halsano lactic
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3CH(OH) COOH ()?
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga CH3CH (OH) COOH, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda C6H12O6 (fructose), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C6H12O6 → 2CH3CH (OH) COOH
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3CH(OH) COOH ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CH(OH) COOH (fructose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CH(OH) COOH () alaab ahaan?
Muujinta isleeg ka 1 ilaa 5 Page 1